Kooxda Arsenal oo maanta dhammaystiraysa saxiixa Matteo Guendouzi… (Booskee ka dheelaa?) – Gool FM
Kooxda Arsenal oo maanta dhammaystiraysa saxiixa Matteo Guendouzi… (Booskee ka dheelaa?)
(London) 09 Luuliyo 2018. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay maanta oo Isniin ah dhammaystirayso saxiixa laacibka khadka dhexe ee naadiga Lorient, Matteo Guendouzi.
The Gunners ayaa la fahamsan yahay inay ogolaatay inay bixiso qiimaha lagu heli karo laacibkan 19-jirka ah oo lagu sheegay 7 milyan oo gini, kaasoo ka tirsanaa kooxda Lorient ee dalka Faransiiska tan iyo sanadkii 2014-kii.
Warbixinno badan oo laga helayo Waddanka Faransiiska ayaa sheegaya in labada kooxood ay sidoo kale isku raaceen in laacibku uu saxiixo heshiis shan sanadood ah, waxaana uu mari doonaa tijaabada caafimaad ka hor inta uusan dhammaystirin heshiiska.
Guendouzi ayaa la filayaa inuu maanta oo Isniin ah u soo duulo Magaalada London ee caasimadda Waddanka Ingiriiska si uu u dhammaystiro u dhaqaaqitaankiisa kooxda lagu naanayso Gunners.
Haddii ay kooxda ka dhisan garoomada Emirates maanta dhammaystiro saxiixa Guendouzi waxa uu noqonayaa saxiixii afaraad oo ay xagaagan sameyso kooxda Arsenal.
Macallinka cusub ee Arsenal Unai Emery ayaa horay ula saxiixday Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner iyo Sokratis Papastathopoulos tan iyo markii uu kooxda yimid, halka laacibka khadka dhexe ee Uruguay, Lucas Torreira uu sidoo kale ku dhow yahay inuu u soo dhaqaaqo garoonka Emirates.
Guendouzi ayaa sidoo kale la la xiriirinayey kooxda ay Arsenal ku xafiiltamaan Waqooyiga Magaalada London ee Tottenham Hotspur, laakiin haatan waxa ay u muuqataa in saxiixa xiddigan lagu garaacay Spurs.
Shanta ciyaaryahan ee ugu bandhigga fiicnaa wareeggii siddeed dhammaadka Koobka Adduunka 2018 oo la shaaciyey… + SAWIRRO